Abafazi abaninzi banesikhalazo, bahambaphi na amadoda angempela? Kodwa aba bantu ababelethi kwaye abayilo lusuku oluhle kakhulu lwelanga - kufuneka baveliswe ukusuka ngexesha lokuzalwa. Unzima kunabo bonke oomama abangatshatanga. Ngokuqhelekileyo, ngoomama onjalo, abantwana bakhula ngakumbi, banokuthintela kwaye bachitheka. Ewe, kwaye abaninzi abantwana balingisa ooyise ekuziphatheni kwindoda, kwaye ukuba akukho ntata ecaleni kwakho, ngoko umntwana kufuneka axelise unina. Kwaye ke la bantwana bakhula "besetyhini" kwaye balimaza ngokuziphatha nangentlalo. Ngoko ke, kubaluleke kakhulu ukuqala ukufundisa oonyana bakho ngokufanelekileyo ebuntwaneni. Namhlanje siya kukuxelela malunga nendlela yokukhulisa umntu kumntwana okhula ngaphandle kobawo.
Okokuqala , kubaluleke ukuba le nkwenkwe ngokuphindaphindiweyo kunxibelelana nabantu. Kubalulekile ukuzungezela umntwana kuphela "amadoda", ngokuba ngaphandle kwegunya kumntu kayise, le nkwenkwana imfuna kwamanye amadoda ahlala ebona oo-grandfathers, abazalwana, oomama, abaqeqeshi, njl. Kwaye amadoda angaphezulu kumntwana, bhetele kuya kuveliswa ukuziphatha komntu kunye nesimo sengqondo ngesini sesini. Akukho mzekelo kufuneka umama athathe zonke iingxaki aze abonise igunya lakhe kunye negunya. Ezi zimpawu ziyakunqanda umgaqo womntu kwintsana-umnqweno wokuba yinkokheli kwaye uzibhokoxa ngokwawo-kwaye ubulale ngokupheleleyo ukuziphatha komntu. Yaye ngobawo omele ukhulume kuphela kakuhle kwaye akukho mzekelo ungakhonanga kwindodana eyayikushiye uyihlo.
Okwesibini , ndumdumise umntwana rhoqo, egxininise ububungqina bakhe - yitsho into enesibindi, onamandla, onesibindi, onogulane kunye nokuzimisela. Ukuba le nkwenkwe inqobile nayiphi na ingxaki okanye iphakanyisile into enzima, kuyimfuneko ukuba ithi: "Umnichka! Yiloo ndlela amadoda okwenene enza ngayo! ".
Okwesithathu , ungabonakali unyana wakho ukuba ungumfazi oqinileyo kwaye uyamthabatha yena kunye noyihlo nonyoko. Umama kufuneka ukuba ngowona nto ibhinqa, lincinci, lithenda, luthando kwaye luthando. Ngombulelo, umntwana uya kufunda ukusibelelana, ukunyamekela, ukuncedisa nokuxhasa unina - zonke iimpawu zenza le nkwenkwe ithembele kwaye yomelele indoda enokuzimela, yenza nayiphi na igqibo kwaye imele loo mfazi.
Okwesine , kwiminyaka eyahlukeneyo yonyana, bonisa uthando oluhlukeneyo lomama. Ngokomzekelo, ekufikeni kwentsha kunye nobutsha, akudingeki ukuba usebenzise ngaphezu kwakho ukunyamekela. Ngaphandle koko, unyana uya kuhlala engenakuphuhliswa koluntu kwaye kuya kuba nzima kuye ukudala ubomi bakhe. Unyana akafanele abe ngumxhomekeke ngokomzwelo kunina, mhlawumbi akaze akwazi ukutshata.
Okwesibini , kufuneka ufundise le nkwenkwe ngoncedo lwezinto ezibonakalayo kuma-movie nakwiincwadi. Kuphela kufuneka ukhethe ifilimu okanye iincwadi. Imisebenzi emihle yileyo isebenza apho amaqhawe aya kuba ngamagqabi, ama-musketeers kunye nabanye abalinganiswa abagcina kunye nokukhusela kuphela ihlabathi, kodwa nabafazi. Musa nje ukhethe i-movie yezenzo, i-melodramas kunye namahlaya.
Okwesithandathu , eneminyaka eyi-3-4 unyana kufuneka athenge amathoyizi emakhwenkwe, ngombala afanele ahlalise ithoni. Ekubeni amantombazana amnandi athetha. Kwiminyaka emi-5-6, unyana kufuneka adlulise imisebenzi eyenziwa kunye namadoda - umzekelo, ukunyanzelisa isilumko, yenza isondlo. Ngaphambili umntwana uqala ukunceda amadoda amakhulu, ngaphambili uya kuba nokuzithemba kwaye inkwenkwe iya kuziva ukubandakanyeka kwakhe kuluntu uluntu. Ebudeni besikolweni, umntu kufuneka ahlakulele isimo sengqondo esifanelekileyo kumantombazana, umzekelo, bancede bathathe iimbogi ezinzima, bavulele umnyango baze bavumele intombazana ukuba ihambe kwaye ibancede ngazo zonke iindlela. Kwaye ebusheni, kufuneka unikezele ngakumbi inkululeko kubantwana bakho. Makhe akhethe abahlobo kunye nomdla. Hlonipha ukukhetha kwakhe kunye nezigqibo, ngoko ke unyana wakho uya kufunda ukuba uxanduva lwezenzo zakhe, uya kuba yedwa.
Ngesixhenxe , ngokuphindaphindiweyo kunokwenzeka, unyana makabonise ukuzimela kwakhe. Masibophe izihlangu zakhe, uhlambe, agqoke, aqokelele, njl. Unyana kufuneka afunde ukwenza konke ngokukhawuleza kunokwenzeka ngaphandle kokuncedwa ngumama, ngokuba uyindoda ezayo kwaye uya kufuneka ancede abesetyhini, kungekhona ngokuthe ngqo.
Okwesibhozo , kunye nendodana okufuneka udlale kuphela kwimidlalo yezemidlalo, ngokomdlalo webhola, ihokkey okanye ukulwa kwiinkemba zeplastiki. Futhi musa ukuphazamisana nemisindo enomsindo, ohambayo kunye noqhagamshelwano kunye noontanga. Ukuba le nkwenkwe ibuyele ekhaya inxeba, ukukhawuleza okanye ukunyuka, akufuneki ukuba ukhathazeke ngale nto, yiphatha nje isilonda. Phatha unyana wakho ngenhlonipho kwaye ungalokothi umyalelo, kodwa cela uncedo, kuba umntu ozayo ukhangele kuwe.
Ayikho nayiphi na into engenakwenzeka:
- Nciphisa unyana wenyathelo lakhe;
- Uphethwe kakhulu;
- fundisa le nkwenkwe ngokungqinelana nolawulo;
- uthenge amathoyizi othanda, kungekhona kuye;
- ukuthintela ukudlala nabafana ababi;
- vumela unyana wakho ukuba alale nawe embhedeni;
- umnyanzela ukuba akuthobele ngokungenamthetho;
- ungamniki umfana ithuba lokuqonda iingxaki zengxabano kunye noontanga bakhe.
Ngoku uyazi indlela yokudlala indoda yangempela kumntwana okhulayo ngaphandle koyise.
Indlela yokuqala ukufunda indlela yokufunda
Kutheni ufuna ukuthetha nomntwana wakho
Umona wabantwana ekuzalweni kwabanye abantwana
Indlela umfazi okufanele akhangele ngayo ukuthanda umntu
I-Lenten pasta casserole
Inyama encinci kwiipate
Ikhaya leMaski yeeNwele eziMileyo: Iindlela zokupheka eziphambili kakhulu
Iimpawu zemvelo zazo zonke iintlobo zesikhumba
Indlala yonyango ekhaya
Ndingayinika ntoni ukutya emva kokutyhefuza?